Facebook ပေါ်နဲ့တကယ့်အပြင်မှာ အပြတ်အသက်ကွာခြားနေတဲ့သူမရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွသက်သေပြလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Cele Snap
Beauty Blogger ကနေ တစ်ရှိန်ထိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း cele တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး နေခြည်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ Beauty Blogger ကနေ အနုပညာအလုပ် ဘက်ပါကူးပြောင်းခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း အာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ကနေခဏတာပျောက်သွားခဲ့ပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေပြန်မြင်နေရတာပါ။ဒါပေမယ့်လည်း စစ်တပ်အသိုင်းဝိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့ချိန်ထိ သူမကိုဝေဖန်နေကြတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲနောက်ပိုင်း ပုံလေးတွေ Video လေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်တွေ instagram လေးတွေကနေတင်ပေးနေ တာဖြစ်ပါတယ်။ခုမှာလည်း Fb နဲ့အပြင်မတူတာဘယ်သူလဲ? ဆိုပြီးသူမရဲ့ကွဲပြားမှုလေးတွေကို video လေးနဲ့တင်ထားတာပါ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေခြည်ဦးရဲ့ Fbနဲ့အပြင်ကွာခြားတဲ့ Video လေးကို လည်းကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။
Credit ; Cele Paradise
Beauty Blogger ကနေ တဈရှိနျထိုးနဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျး cele တဈယောကျဖွဈခဲ့တာကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး နခွေညျဦးပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ Beauty Blogger ကနေ အနုပညာအလုပျ ဘကျပါကူးပွောငျးခဲ့ပွီးအောငျမွငျမှုတှနေဲ့ ရပျတညျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သို့ပမေယျ့လညျး အာဏာသိမျးလိုကျခြိနျမှာတော့ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားရဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေို ခံနရေတာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူမှုကှနျရကျကနခေဏတာပြောကျသှားခဲ့ပွီး ခုနောကျပိုငျးမှာတော့ သူမရဲ့ပုံရိပျတှပွေနျမွငျနရေတာပါ။ဒါပမေယျ့လညျး စဈတပျအသိုငျးဝိုငျးဖွဈတာကွောငျ့ ယနခြေိ့နျထိ သူမကိုဝဖေနျနကွေတုနျးပဲဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး ဝဖေနျမှုတှကွေားထဲနောကျပိုငျး ပုံလေးတှေ Video လေးတှကေို လူမှုကှနျရကျတှေ instagram လေးတှကေနတေငျပေးနေ တာဖွဈပါတယျ။ခုမှာလညျး Fb နဲ့အပွငျမတူတာဘယျသူလဲ? ဆိုပွီးသူမရဲ့ကှဲပွားမှုလေးတှကေို video လေးနဲ့တငျထားတာပါ။ ပရိသတျကွီးလညျး နခွေညျဦးရဲ့ Fbနဲ့အပွငျကှာခွားတဲ့ Video လေးကို လညျးကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော။
My Day မှာတင်လိုက်တဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံကြောင့် ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပြီလို့ပရိတ်သတ်တွေထင်ကြေးအပေးခံနေရတဲ့ ရဲရင့်အောင်